Egwu Israel Army Bullet Oge na Golani Oak Tree Insignia
Nzipu sitere na Europe
Biko rịba ama: a ga-akwụ ụgwọ okpukpu ọnụ na ego ma agaghị enyefe ya ebe ọ na-aga. Njikọ kalịnda nke Israel abụghị ọrụ, ọ dịghị alaghachi ma ọ dịghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na agbapụ bọtịnụ ahụ ma hapụ ya.
Anyị nwere mmasị na nke a nke Golan na-awakpo bọmbụ égbè ruo ogologo oge nke na anyị na-ewetara gị ya! Oak bụ akara ngosi nke ndị agha Golani. Dịka ihe niile anyị ji atụ egwu, nke a bụ otu n'ime ezigbo mgbochi. N'ezie, bọmbụ na-eme ka ntụ ntụ gharazie ịdị ọcha. Nke a dị mma nke Israel bullet na-eme ka otu ụlọ nke ndị agha mara mma nke Israel. Nke a bụ onye na-enweghị atụ! Ihe ndị a na-atụ egwu bụ ezigbo ngwaahịa Israel. Pendants, dị ka ha na-ama mmasị Israel ncheta maka ndị njem nleta ruo ọtụtụ afọ. Onyinye a na-ewu ewu na-agụnye bọl ọla kọpa.
Agha agha nke Israel mgbe a na-achọ ya na IDF Insignia
Israel Air Force, Star of David Necklace
Nkume Nkịta nke Israel na Hamsa
© 2011-2020. Ntinye nke nche site na mba nile: Germany, Switzerland, Hong Kong, Singapore, Italy, USA + 7-966-158-75-08